Kedu nri taa maka ezi ahụ ike? - Afrikhepri Foundation
Mọnde, june 21, 2021
Kedu nri taa maka ezi ahụike?
Na-agụ: 7 mins
Kedu ihe anyị ga-eri ka anyị wee ghara imebi anyị?
Nri kachasị mma bụ mgbe ọ bụla ihe okike na-enye anyị. Ọ bụ ihe dị iche na nke “denatured” nri na nri ụlọ ọrụ na-enye anyị. Ezi ihe oriri kwesịrị:
• nke ukwuu na crudities, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi oge,
• zuru oke iche,
• gụnyere: nke kachasị nụcha ma kesie ike,
• site na nri kwa ụbọchị nke unsaturated fatty acids, ekele dị iche iche na-amaghị nwoke mmanụ nke mbụ oyi na ịpị,
• hypotoxic: obere abụba jupụtara (ọtụtụ abụba anụmanụ), efere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nnu na shuga,
• jikọtara oge,
• ma nwee obi ụtọ! Ọ bụghị nri ma ọ bụ nkà nke ibi ...
"Anyị na-eji ihe anyị na-eri," ka Dr. KOUSMINE kwuru. Onye ọ bụla nwere ọrụ maka ịhọrọ mmanụ ha. Ya mere, buru ibu a na-ejighị n'aka!
1. Akwụkwọ nri, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi oge
Ọ bụ otu n'ime isi ihe ndị na-enye vitamin, mineral na eriri, nwere oke akụkụ nke antioxidants na micronutrients na-echebe (megide free radicals). Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịlụso oke ibu na ọrịa shuga ọgụ (obere ume ike na ike satiating) yana imegide osteoporosis (ike dị iche iche). Ihe oriri nke 500 g nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri kwa ụbọchị na-eduga na 30% Mbelata ọnwụ na ụmụ nwoke (ọmụmụ SUVIMAX).
Ha na-adịkarị obere ọkụ, enweghị ụtọ ma ọ bụ oge ịkwadebe. Ọ dị mkpa maka mgbaze ịmalite nri nri nri. Ezi salads na radish, ube oyibo, mushrooms ma ọ bụ mkpụrụ osisi ndị dị otú ahụ dị ka pears, mkpụrụ vaịn, melons, herbs, seasoned na ezigbo oyi-enwe na obere mmanya mman. Anyị nwere ike inyefe aka na-eme ka ọ bụrụ ihe ga-eme ka obi dị anyị mma! Ọ bụrụ na oge dị mkpirikpi, were mkpụrụ. Ndị a ga-ekpochapụ tupu ma ọ bụ n'èzí nri maka nsị digesti. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe oriri, chee echiche banyere mkpụrụ osisi ma ọ bụ mkpụrụ osisi. Na nri, mkpụrụ nke oge na-eji dochie achịcha na pastry. Họrọ ụdị ngwaahịa ọgbara ọhụrụ: ha bụ ọnụ ala ma gaa ahịa, ozugbo na (obere) onye mmepụta ihe. Achịcha na-esi nri na nri ọ bụla. Play na flavors, agba, ngwa nri na aromatics. Ị ga-ahụ ntụgharị uche gị maka nri anụ ahụ dị mma nke ọma ma ị ga-emetụta ike ha.
2. Mkpụrụ zuru ezu
Ha bụ ndị ikwu dara ogbenye nke nri anyị na-eri ugbu a, ewezuga ọka flakes na ihe ndị yiri ya, na-agbasaghịkwa ihe ndị ọzọ sitere na ntụ ọka ọcha anyị na-eri oke. Rediscover aja aja sourdough achịcha, pasta na unblitted ọka, osikapa agba aja aja (gburugburu ma ọ bụ ogologo, Thai ma ọ bụ Basmati, acha ọbara ọbara ma ọ bụ oji), chọpụta quinoa, millet, obere mkpoputa, buckwheat ... Ndị a ọka ebe ahụ, esi nri n’ime ite na akwụkwọ nri na ngwa nri, ikekwe lentil ma ọ bụ mkpo ndị ọzọ iji dozie ndị na-edozi ahụ, bụ efere ngwa ngwa a kwadebere, digestible na ọnụ ala. Ejiri maka nri ehihie ma ọ bụ nri abalị ma jiri ezigbo salad mee nri, efere a bụ ezigbo nkwado maka usoro ụjọ ahụ. Mkpụrụ ọka dum na-enye ume ngwa ngwa, ewepụtara ya dị ka ọ dị mkpa. Ha na-ebelata mkpa shuga na nri ma mezie ịdị arọ gị. Na mgbakwunye na shuga dị nwayọọ, ha na-enye eriri, protein, vitamin B na mineral. Shuga zuru oke, dochie shuga ọcha, site na ụba ya na nnu na ihe ndị na-achọpụta na-enyekwa aka ịchịkwa oriri shuga.
3. Ezi abụba abụba
Ọ dị mkpa maka ahụike iji rie kwa ụbọchị abụba na-enweghị afọ ojuju nke anyị na-ahụ na mmanụ na-amaghị nwoke nke mbụ ịpị oyi: ezigbo mmanụ oliv, mana mmanụ mmanụ sunflower, bara ụba na omega 6, gbakwunye site na ukpa ma ọ bụ mmanụ a zụrụ n'ike maka ọgaranya ha na omega 3. mmanụ ndị a na-enweghị atụ mbụ oyi na-atụ na-adị ndụ, mmanụ na-emebi emebi. Ọ dị mkpa iji mee ka ha dị jụụ ma chebe ya na ọkụ, na iri ha ngwa ngwa mgbe emepechara. Anyị nwere ike, dịka ọ dị mkpa, gbakwunye na mgbede primrose, borage, azụ na mmanụ linse. Ezigbo nguzozi nke fatty acids n’enweghi mmanu na-enye ohere ka e mee ezigbo ihe n’ujo anyị na nke homonụ, kamakwa ọgụ anyị (ihe dị mkpa maka ịrịa ọrịa atụ). Ọ na-ekwe nkwa ogo anụ ahụ anyị na akpụkpọ ahụ mucous anyị. Maka otu nzube ahụ, zere abụba ndị na-adịghị mma: mmanụ a nụchara anụcha, margarines, nri eghe na isi nri na mmanụ. Belata oriri nke anụ mara abụba, anụ oyi, chiiz, bọta. Rie kwa azu karia, azu ndi azu na azu azu, nkpi nkpi na nke aturu, akwa ulo ndi di nro, nkpuru osisi, akpukpo oku ... Nri oriri nke polyunsaturated fatty acids na grains nile na enye ohere. na-egbochi ị addicụ ọgwụ ọjọọ na shuga, kọfị, ụtaba.
4. Hygiene na pH Intestinal Control: Ụzọ na Ahụ Ike
Oriri nke omega 3 na - eme ka eriri afọ nke eriri afọ ghara idi ike: nke a na - egbochi ịbanye nsị n'ime ọbara. E gosipụtawo ọtụtụ etuto kansa dị ka nsị ndị yiri nke dị na eriri afọ. Mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa iji kpochapụ eriri afọ nke nsị ya (nri na enema) iji kwalite ọrụ nsị nke imeju maka abamuru nke ahụ dum. Ka anyị ghara ichefu na 70% nke mkpụrụ ndụ na-enweghị nchekwa dị na eriri afọ. N'ime akwụkwọ e dere na polyunsaturated fatty acids site na Machị 2004, anyị na-agụ, sị: “Anyị nwere ike ịtụle nsogbu uche dị ka ọrịa mgbakasị ahụ nke ụbụrụ, nwanne nwanne nke ọrịa mgbakasị nke eriri afọ. "Iche echiche banyere ... (cf. SERVAN SCHREIBER," Healing ") Anyị ahụla na nri na - ezughi oke na - eme ka ahụ anyị dịkwuo mma na nsonaazụ nke demineralization, osteoporosis, ogbu na nkwonkwo, nkwonkwo akwara, ọrịa caries kamakwa ọrịa na - aga n'ihu, ime ihe ike ... Nke a ka njọ site na nrụgide, ibi ndụ ịla n'iyi, enweghị ụra, nsogbu mmetụta uche, mmetọ, ụtaba ... Naanị nri dị iche iche na nke dịgasị iche iche, nke kachasị na -ewekarị akwụkwọ nri ma na-adịchaghị nnu, jikọtara ya na ndụ dị mma (mmega ahụ mejupụtara mkpa mmadụ na ụra zuru ezu, na-ezere isi mmalite nke nrụgide na mmetọ dị ka o kwere mee) na-enye anyị ohere ịnọgide na-enwe pH anyị na 7 maka ezigbo nguzozi nke ọrụ ahịhịa. Mmamịrị pH ule bụ ụzọ kachasị mfe iji lelee ọnọdụ ahụike anyị ma nye anyị ohere ịme ihe ngwa ngwa ọ bụrụ na anyị enweghị aha.
Anyị ahụla na ịgbanwe nri iri nri nke French iji mee ka ahụike ha dịkwuo mma abụrụla mkpa ahụike ọha na eze. Otutu ndụmọdụ banyere ihe oriri na-edozi ahụ site na NATIONAL HEALTH NUTRITION PROGRAM, nke ndị ọkachamara na-edozi ahụ na-eri nri taa, kwekọrọ na ndụmọdụ Dr Kousmine nyere:
iji mee ka onyinye a na-etinye na ume mmefu na-eri kwa ụbọchị n'ozuzu ubochi ya na mkpuru ala glycemic ala
belata njupụta nke abụba jupụtara na ya ma mụbaa mmiri ara ehi abụba unsaturated
belata ihe oriri nke ngwa ngwa (sugar sugar, grained cereals, graffed cereals, confectionery, pastries ...)
iji belata ikike nke protein anụmanụ, site n'ịkwalite oriri azụ, ma mee ka protein dị na nri dịkwuo elu
kpuchie ihe ndị dị na vitamin, mineral na eriri dị iche iche site n'okwu a: "5 ruo 10 mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri otu ụbọchị "
kpachibido ịṅụ mmanya na-aba n'anya
dịkwuo kwa ụbọchị nwayọọ emega ahụ
Dọkịta C. KOUSMINE, afọ 60 gara aga, guzobere njikọ dị n'etiti mgbanwe dị iche iche nke omume iri nri nke ndị nna ochie na mmepe nke ọrịa na-arịa ọrịa na-akpata ọrịa autoimmune. Ọ bụ onye ọhụụ na onye ọsụ ụzọ.
Usoro ọgwụgwọ ya zuru ụwa ọnụ nke dabere na ogidi 5 dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Laghachi na nri dị mma bụ isi ogidi nke usoro ya.
Mụta iri nri nke ọma, chekwaa ma ọ bụ nwetaghachi ahụike, ume na joie de vivre dị n’ime iru onye ọ bụla n’ime anyị. [Wpdiscuz-feedback id = "wx0coutfjy" question = "Kedu ihe ị chere? »Emeghere =» 1 ″] [/ wpdiscuz-nzaghachi]
Gee Tomatis na nri
Akụkọ ifo Dogon
Laghachi na ọnọdụ ime mmụọ nke Negro-Africa (Video)
Cosmogony nke ndị Rosicrucians - Max Heindel (Audio)
Akwụkwọ ozi sitere n'aka Hugo Chavez na Africa: "ka anyị kpụọ otu mmadụ, otu kọntinenti"